トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Nepachinko yokumusoro mari mu pfachura michina Zvakaoma rutapudzo kuti mutengi
chadzainyanya, asi pane guta mari mune imwe yenyaya idzi nokuda guru kurema iri mari Pachinkoya. Sezvo chinobuda Zvinogoneka kuti usingagoni kuderedzwa ari payout kuti mutengi uye pano yakawandisa kushandisa mari, asi tinofanira kuongorora somumwe zviratidzo.
ichangopfuura, tine ichiwedzera dzemhando yepamusoro zvikuru nepachinko parlors. Nechitarisiko Chokwadi, kusvikira nomucheka chikamu zvishongo uye chimbuzi, hapana zvishoma nepachinko parlors kuti shandisa mari. Panewo zvitoro kuti vari Akanamatira mumwe pakuvaka. Somuenzaniso, mushandi yunifomu, mapepa, zvichingodaro Pane zvakawanda chair zvinogona kugadziridzwa uye pasi mudenga. Nemaonero
nepachinko yokumusoro divi, kana pane kunyange kana basa kuti vatengi chinangwa, akadai akadai nechitarisiko asunga vanhukadzi vatengi, unogona kuva musoro mari kukwezva vatengi chinangwa. A Pamusana mubhizimisi, kana kumusoro achimhanya, nokuti ndiyo shanduro riri kumusoro Sales, guta mari zvinogona akati kubudirira zvikuru.
Zvadaro, kana kutengesa kukwira, nokuti ndiyo shanduro zvakakwana wakaderedzwa kunogona kuva payout kuti mutengi, zvichava kuti nepachinko yokumusoro kusiya yakachena, achava pasina kutaura zvose. Kuva imwe yakawanda guta mari, nepachinko parlors kuti bhora ikoko achimhanya ari paavhareji, hapana dambudziko iri nepachinko parlors, zvinogona kuderedza purofiti.
Asi dambudziko nyaya kuti, apo mari kwete akawandisa guta mari, ari nepachinko yokumusoro kuti mashandiro haasi uyewo vawedzere rokutengesa haaratidzi. Kana akadaro nepachinko yokumusoro, mari unoenderana guru mari, ichava dzimwe kupora kunokosha kana Hazvina. Sezvo mutengo nokupora ishanduro zvakaoma, mumamiriro ezvinhu akadaro, hatina chikonzero chokuti anogona Nante rutapudzo kuti vatengi.
ndiyewo yakanaka, akadai chitarisiko, nepachinko parlors uye kunzwa yokunyanyisa unevenness iri payout, kana kwomudzimu ane nepachinko yaiitirwa kuti haasi kugadzikana, ndapota tarisa mupfungwa kuti panewo mukana rutapudzo kwakaoma. Uyezve, imba uyewo kusakadzwa, kunyange kuti akasviba-chitoro kushongedzwa uye chimbuzi, pane zvakawanda sezvechinyakare nepachinko yokumusoro. Kana kuti munhu nepachinko yokumusoro uyewo nevaya vaida zvishoma ushingi kupinda, iwe Ndinowanzotaura nepachinko yokumusoro iri refu-yakagadzwa zhinji. Pasina kushandisa
chitarisiko, nezvimwewo, nepachinko tenga kuti mutambo iri payout, zvingava zvisina kunge usingashandi guta inivhesitimendi. Pane akachena nepachinko parlors, kana payout Zvakanakawo, ndinofunga kuti kazhinji vanodzorera zvakanaka. Nepachinko zvitoro asingadi mari uyewo kumusoro guta mari, zvingava uyewo akasungirirwa payout pasina chinhu zvipikiri kuchinja.
Muchidimbu, zvakadini pane ari payout, sei chipikiri zvikuru kugadziridzwa zvakanaka, uye kutarisa mashandiro ezvinhu, izvi zvitatu, unogona kufembera rutapudzo zvinogoneka kana mamiriro kuenderana guru inivhesitimendi . Uye saka yakanaka uye dirtiness chitarisiko, kwete kusiya kunze ndechokuti saka hapana ukama.
vanoda guta mari kuona ndechokuti chikamu kuti kana kugadzirisa wakaputsika vaya. Nezvimwewo kuti yavhunika chimbuzi Toka rwakaputswa mhepo kutonhodza, kwete sokuti kukwanisa kuisa kuoneka chikamu chako, kusina chikonzero kuti unogona Nante rutapudzo. Sezvo akaputsika zvasara nzvimbo kazhinji nepachinko yokumusoro, ndinofunga kuti hapana payout.
Ndinofunga kuti kana zvichibvira kuti mune izvi nyaya iri kosi reference, asi zvikuru zvakavimbika kungava chinhu kutarisa sezvairi Data pasina kunyengedzwa akadai chitoro kushongedzwa. Chivako uyewo rabvaruka, anonziwo tsvina-chitoro kushongedzwa uye chimbuzi, pane zvakawanda sezvechinyakare nepachinko yokumusoro. Kana kuti munhu nepachinko yokumusoro uyewo nevaya vaida zvishoma ushingi kupinda, iwe Ndinowanzotaura nepachinko yokumusoro iri refu-yakagadzwa zhinji. Pasina kushandisa
Ndinofunga kuti kana zvichibvira kuti mune izvi nyaya iri kosi reference, asi zvikuru zvakavimbika kungava chinhu kutarisa sezvairi Data pasina kunyengedzwa akadai chitoro kushongedzwa. Re imwe chete chipikiri kugadziridzwa zvakanaka, uye kutarisa mashandiro ezvinhu, vatatu ichi, unogona kufungidzira kuti rutapudzo kana mamiriro kuenderana guru mari anoitwa. Uye saka yakanaka uye dirtiness chitarisiko, kwete kusiya kunze ndechokuti saka hapana ukama.
Ndinofunga kuti kana zvichibvira kuti mune izvi nyaya iri kosi reference, asi zvikuru zvakavimbika kungava chinhu kutarisa sezvairi Data pasina kunyengedzwa akadai chitoro kushongedzwa.